I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yoVavanyo lweeKhowudi zoVavanyo lweSifo-SARS-CoV-2 Iimveliso zovavanyo-iSinocare
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yovavanyo lweeNtsholongwane
(Indlela yeColloidal Gold)
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yovavanyo lweeNtsholongwane ye-Antibody yeyomgangatho ukufunyanwa kwe-SARS-CoV-2 IgM / IgG antibody kwi-serum yabantu, iplasma okanye isampulu yegazi elipheleleyo.
Inoveli coronavirus yeyendidi yohlobo. I-COVID-19 sisifo esosulelayo sokuphefumla. Ngokuqhelekileyo abantu bayachaphazeleka. Okwangoku, izigulana ezisulelwe yinoveli yecoronavirus zezona zinto ziphambili kusulelo; abantu abosulelekileyo abosulelekileyo banokuba sisifo esosulelayo. Ngokusekwe kuphando lwangoku lwe-epidemiological, ixesha lokuxubusha ziintsuku ezi-1 ukuya kwezi-14, ubukhulu becala iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7. Iimpawu eziphambili zibandakanya umkhuhlane, ukudinwa kunye nokukhohlela okomileyo. Ukuxinana kwempumlo, impumlo ebusayo, umqala obuhlungu, i-myalgia kunye norhudo zifumaneka kwiimeko ezimbalwa.
l Ukufunyanwa ngokukhawuleza kwimizuzu eli-15 ukuya kwengama-20
l Ukuchongwa komgangatho owahlukileyo wee-antibodies ze-IgM / IgG
l Ukusebenza okulula ngaphandle kwezixhobo
l Iziphumo ezibonakalayo kunye nokutolika okulula
Uvavanyo lwentsholongwane (+)
Ukuvavanywa kwintsholongwane (-)
Isigulana sikwixesha lewindows lokuvavanywa kweserolo ye-coronavirus, ii-antibodies ezithile kwinkqubo yomzimba yokuzikhusela azikaveliswa.
Isigulana ngokuqinisekileyo asikaze sibe nosulelo lwe-COVID-19.
Isigulana sithetha nje sikumanqanaba okuqala osulelo lwenoveli ye-coronavirus.
Kukho amathuba amakhulu okuba usulelo lwenoveli lwe-coronavirus lukwisigaba esibi. Ngeli xesha, ukuchaneka kweziphumo zovavanyo lwe-asidi ye-asidi kufuneka kuthathelwe ingqalelo, kwaye kunyanzelekile ukuba uqinisekise ukuba ngaba isigulana sinezinye iintlobo zezifo. Iimeko ezifanelekileyo okanye ezibuthathaka ezilungileyo ze-IgM kwizigulana ezibangelwa yirheumatoid factor ziye zafunyanwa.
Izigulana zinokuba kwinqanaba eliphakathi okanye eliphambili losulelo lwenoveli ye-coronavirus okanye usulelo oluphindaphindiweyo.
Izigulana zinokuba nosuleleko lwangaphambili kodwa sele zichache okanye intsholongwane iye yasuswa emzimbeni. I-IgG eveliswe yimpendulo yomzimba igcinwe ixesha elide kwaye inokufunyanwa kwisampulu yegazi.
Isigulana sikwisigaba esisebenzayo sosulelo lwentsholongwane, kodwa umzimba womntu uvelise ukhuseleko kwi-coronavirus yenoveli.
Isigulana sisandula ukusulelwa yi-coronavirus yenoveli, kwaye umzimba okwangoku ukwisigaba sokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa intsholongwane isusiwe emzimbeni kwaye i-antibody ye-IgM ayithotyelwanga kumda wokubhaqa; okanye uvavanyo lwe-nucleic acid lunokuba neziphumo ezibi ezingezizo kwaye isigulana sikwinqanaba losulelo olusebenzayo.